Ciidamada Danab oo sheegay in ay dagaal ku dileen Maxaabiis Shabaab ka tirsanaa | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Ciidamada Danab oo sheegay in ay dagaal ku dileen Maxaabiis Shabaab ka...
Ciidamada Danab oo sheegay in ay dagaal ku dileen Maxaabiis Shabaab ka tirsanaa
Saraakiisha Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Danab ayaa guulo ka sheegtay Dagaal ay la galeen ururka Al-shabaab, kaasi oo aroorinimadii hore ee saakay ka dhacay degaan u dhow Alifow oo hoosyimaada degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Dagaalkan ayaa yimid kadib markii xoogag ka tirsan Shabaab ay weerar jidgal ah u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada Kumaandooska Soomaaliya oo xilligaasi galbinayay Maxabiis ka tirsan ururka Al-shabaab.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Danab ayaa Idaacadda Ciidamada Qalabka Sida waxa ay u xaqiijiyeen in dagaalka lagu dilay laba Maxabuus oo horey ay gacanta ugu hayeen Ciidamada, kadib markii ay isku dayeen in ay ka baxsadaan gacanta Ciidamada, intii uu dagaalka socday.
Labada Maxbuus ee ciidamada ay dileen ayaa waxa ay kala ahaayeen Kalar Maadow Caliyow oo Al-shabaab u qaabilsanaa Sarkaalkii Qaraxyada Shabeellaha Hoose halka kan kalena uu ahaa C/laahi Xasan oo u qaabilsanaa La taliyaha Sarkaalka Al-shabaab ee Gobolka shabeellaha Hoose.
Saraakiisha Kumaandooska Soomaaliya ayaa beeniyay in ururka Al-shabaab ay la wareegeen Gadiid Dagaal oo ay Ciidamada lahaayeen, waxayna Saraakiisha sheegeen in arrintaasi ay tahay mid Been abuur ah, oo sal iyo raad midna aanan laheyn.
Xoogaga Shabaab ayaa sheegtay inay gubeen gaadiidkii ay wateen ciidamadaasi, kadib markii ay qabsadeen, sida laga baahiyay Idaacada ku hadasha Afka Shabaab ee Andalus.
Shabaab waxay kaloo sheegteen khasaare dhimasho iyo dhaawac inay gaarsiiyeen ciidamadii halkaasi marayay, balse ma aysan sheegin tiro dhimasho iyo dhaawac intaba